Iibinta Wave - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax waxay isticmaashaa Mashiinka Mashiinka 'Wave Soldering' si loo iibiyo inkasta oo ay ka kooban yihiin daloollo. Waxay ka tayo wanaagsan tahay ka iibinta gacmaha. Waa dhakhso badan tahay.
Mashiinka Mashiinka ayaa sameeya mawjad dhejis ah oo qaab gaar ah leh dareere dhalaal ah oo dhalaalaya dusha dareeraha ee qubeyska alxan leh iyadoo la adeegsanayo meerkuri. Kadibna PCB-ga oo leh waxyaabo la galiyay kursiga xamuulka qaada, oo sii maraya mawjadda dhejiska ee xagasha gaarka ah iyo qoto dheer si loo xaqiijiyo kala-goysyada alxan.
1. Maxaad u dooraneysaa alxanka mawjadaha?
Maaddaama qaybaha ay sii yaraanayaan oo ay PCB cufan yihiin, suurtagalnimada buundooyinka iyo wareegyada gaagaaban ee u dhexeeya kala-goysyada alxan ayaa kordhay. Alxanka wave wuxuu xalliyaa dhibaatadan inta badan. Marka taa laga reebo, waxay leedahay faa'iidooyin kale:
(1) Kalaqaadka gobolka qulqulaya wuxuu caawiyaa dusha sare ee PCB oo lagu dhejiyo alxan si buuxda oo buuxa wuxuuna keenaa shaqeyn wanaagsan oo kuleylka kuleylka ah.
(2) Yaraynta waqtiga laxiriirka inta udhaxeysa alxanka iyo PCB.
(3) Nidaamka gudbinta ee loogu talagalay qaadista PCB waa sahlan tahay in lagu sameeyo kaliya dhaqaaq toosan.
(4) Guddigu wuxuu laxiriiri doonaa alxanka heerkulkiisu aad uyaryahay, taas oo yareyn karta warka guddiga.
(5) Dusha sare ee alxanka dhalaalay wuxuu leeyahay anti-oxidant si uu u go'doomiyo hawada. Ilaa iyo inta mawjadaha alxanku ay hawada ku jiraan, waqtiga oksaydhku hoos ayuu u dhacayaa, qashinka wax lagu iibiyo ee uu sababayo xabagguna waa uu yaraanayaa.
(6) Tayo sare oo kalagoysyada alxanleyda ah iyo iskucelcelis ka kooban alxan.
Isticmaalidda alxanka mawjadaha marka fiilooyinka loo baahan yahay guddiga wareegga
3. Diyaarinta wax soo saarka
Soo kabashada xalka
Kalaqaadka Jinka isku dhaji
4. Awooddeenna: 3 Set
Summad ： Qorrax-dhac
5. Farqiga u dhexeeya kala iibsiga mawjadda & dib u bixinta alaabta:
(1) Dib-u-hagaajinta dib-u-hagaajinta waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha qashinka; Alxanka Mashiinka badiyaa waxaa loogu talagalay dhajinta fiilooyinka.
(2) Dib-u-hagaajinta mar hore waxay ku leedahay alxanka foornada horteeda, oo kaliya xabagta alxanka ayaa lagu dhalaaliyaa foornada si ay u sameysmaan isku-dhaf; Alxamida wave waxaa lagu sameeyaa bilaa foornada horteeda, waxaana lagu sii dhejiyaa foornada.
(3) Dib-u-cusbooneysiinta dib-u-cusbooneysiinta: foomamka hawo heerkulka sare ee dib u sii iibinta qaybaha; Wareejinta Mowjadaha: Foornooyinka wax lagu shubay ee foomamka ayaa loo ruxruxaa qaybo.